Iimpembelelo zeBender Bias kuMbutho
Sciences soLuntu YezoLuntu
Impembelelo Yalo kwimfundo, kwizeNtlalo nakuPolitiko
Ubundlobongela bobulili lukhona kuzo zonke iinkalo zoluntu-ukusuka kwindawo yokusebenzela ukuya kwibala lezopolitiko. Izahlulo zesini zichaphazela imfundo yabantwana bethu , ubungakanani bentlawulo esiyibuyisela ekhaya, kwaye kutheni abesifazane besala emva kwamadoda emisebenzi ethile.
Njengoko ezopolitiko zentetho yabasetyhini ababesetyhini zibonakaliswe ukhetho lwangoku, ukhetho lwezobulili luye lwawela i-aisle kwaye aluyinto engavamile njengoko sinokuyithemba. Kuye inselele amaDemokrasi kunye namaRiphabhliki, athathwe ngabaviwa kwi-oongameli, inkululeko kunye nolonyulo lwendawo, kwaye kuye kwafunyanwa ubungqina kubakhethiweyo kwizikhundla eziphezulu zaseburhulumenteni.
Ummeli-kamongameli kaMongameli uSarah Palin waqatshelwa njengendoda yenkosikazi eyayiyindlovukazi kwaye ixhomekeke kwezinye iimbono, akukho nto eyayingenanto yokwenza nayo ngo-2008.
U-Hilary Clinton waba yisisulu sexesha elibi lokungaxakekanga kwizinto zakhe zombini kunye no-2016 kwi-White House.
Ngethuba lakhe lokuvalelwa kweNkundla ePhakamileyo, u- Sonia Sotomayor wabuzwa ngu-Senator Lindsey Graham malunga "neengxaki zengqondo" kwaye kamva wathi "ukuxakisha".
Umgqatswa we-odolophu wase-2001 e-Allentown, ePennsylvania wayebuzwa esidlangalaleni malunga nemilinganiselo yakhe phambi kwentetho yokuhambisa.
Ezi ziphakamisa umbuzo ukuba ukuba nayiphi na yaba bafazi bebeyimadoda, ngaba bebezithotyelwa kunyango olufanayo? Ubundlobongela kwizopolitiko luyinyani kwaye, ngelishwa, siyibona rhoqo.
Ubulili boBume kwiMidiya
Ngaba abafazi bazibonela ngokuchanekileyo kwi-TV nakwifilimu, kwintengiso kunye nakwiindaba zokuprinta nokupapashwa?
Uninzi luya kuthetha ukuba awanalo, kodwa luya kuphucula. Mhlawumbi kungenxa yokuba ipesenti ezincinci zenza izigqibo zogcino-abo banamanqaku aneleyo ukugqiba umxholo-bangabesifazana.
Ukuba ufuna ukufumana iindaba malunga nemiba yabasetyhini kunye nakwinkalo yabasetyhini, kukho iindawo ezimbalwa ezithengayo .
Izitishi zemveli ziphucula ekujonganeni neengxabano, nangona abanye abasetyhini bavakalelwa kukuba asikwanele.
Amalungu amajelo amaninzi abe ngama-headlines ngokwawo. Ukukhwabanisa uLimbaugh ngokugqithiseleyo uye waba namaqela amanqaku malunga nabasetyhini abantu abaninzi abaye bafumana ukuvuvukala nokuhlambalaza. I-ESPN ka-Erin Andrews yixhoba legama elidumileyo "elidlulileyo" ngonyaka ka-2008. Kwaye ngo-2016 no-17, i-Fox News yaxatywa ngetyala lokuxhatshazwa ngokwesondo kwiinkampani kwiinkampani zokusasazwa.
Ngaphandle kweendaba zeendaba, abanye abafazi bafumana umba kunye nezinye iintlobo zeenkqubo. Ngokomzekelo, ukukhulelwa kwentsha kubonisa kumabonwakude ukuphakamisa umbuzo wokuba bazukisa umba okanye bancedise ukuziyeka.
Kwamanye amaxesha, imibukiso ingasombulula ngokukhawuleza imiba yesimo somzimba wesibhakabhaka njengobunzima. Abasetyhini abadala banokubonakaliswa ngeendlela ezimbi kwaye, kwezinye iimeko, balahlekelwa yimisebenzi kumajelo aseburhulumenteni kuba "abaselula ngokwaneleyo."
Kutheni abesetyhini bafumana iicenti ezingama-80 kuphela kwindoda nganye idola? Isizathu esiyinhloko kukuba kubangelwa ubundlobongela besini kwindawo yomsebenzi kwaye le ngxaki echaphazela wonke umntu.
Iingxelo zibonisa ukuba i-gap yokuhlawula phakathi kwamadoda nabasetyhini kuphucula.
Ngama-1960, abafazi baseMerika benza iipesenti ezingama-60 kuphela ngokweqabane labo njengabafana babo. Ngo-2015, okwenyuka ukuya kuma-80 ekhulwini kwilizwe lonke, nangona ezinye iindawo zingasondelanga loo mqondiso.
Oku kuninzi kwehla kwinqanaba lokuhlawulwa lithathwa kubafazi abafuna amanqanaba aphezulu emisebenzi. Namhlanje, abaninzi abasetyhini bangena emasimini kwenzululwazi kunye ne-teknoloji kwaye babe yi nkokheli kwishishini kunye noshishino . Kukho nenani lezemisebenzi apho abesifazane besenza ngaphezu kwamadoda.
Ukungalingani kwindawo yokusebenzela kudlula ngaphaya kwemali esenzayo. Ukucalulwa kwezesondo kunye nokuxhatshazwa zihlala zihloko ezichaphazelekayo kubasebenzi besetyhini. Isihloko VII soMthetho we-Civil Rights Act ka-1964 senzelwe ukukhusela ekuchaseni umsebenzi, kodwa ayikhuseli onke amabhinqa kunye namatyala kunzima ukubonisa.
Imfundo ephakamileyo yindawo enye apho ubuhlanga kunye nobuhlanga buhlala bunjalo.
Uphononongo luka-2014 lubonisa ukuba kwizinga leyunivesithi , abaqeqeshi bezemfundo abaneenjongo ezilungileyo banokubonisa ukukhetha kubantu abamhlophe.
Ukukhangela phambili kwiiNkcazo zesini
Iindaba ezilungileyo kuyo yonke le nto kukuba imiba yabasetyhini ihleli phambili kwiintetho ze-United States. Inkqubela phambili yenziwe kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye ininzi yayo ibaluleke gqitha.
Ababukeli bayaqhubeka bexhathisa i-bias kwaye ihlala inelungelo kuwo wonke umfazi ukuba akwazi ukuzimela yena nabanye. Ukuba abantu bayeke ukuthetha, le micimbi iya kuqhubeka kwaye asikwazi ukusebenza kulokho kusele kwenziwe ukulingana kwangempela .
> Umbutho waseMerika waseYunivesithikazi (AAUW). Inyaniso elula malunga neGender Pay Gap. 2017.
> Milkman KL, uAkinola M, Chugh D. "Yintoni Eyenzeka Ngaphambili? Uvavanyo lweNgxowa-mali Ukuhlolisisa indlela Ukuhlawula kunye nokuMelelana ngokuBanzi ngokuBambisana kweNkcazo kwiinkampani. "I-Journal of Applied Psychology. 2015; 100 (6): 1678-712.
> Umsebenzi Ward M. 10 apho Abafazi bafumana khona kunabantu. CNBC. 2016.
Inkcazo yeRape Culture kunye neMimiselo
Ziziphi iiNgcaciso eziPhambili zePhepha zophando? Archeology!
Abapostile bakaYesu: Iiprofeto zabapostile bakaYesu
Amanzi e-Crystallization Definition
Ngaba U-anyanisi Uya Kuya Kuphilisa Amagciwane?
Uphando: Imibuzo, iiNgxowa-ndlebe, kunye neefowuni zeeNombolo
ImiBhalo yeSikhhism kunye neMithandazo